maabka fulham ee london
Qasriga Fulham waxa la dhisay 1495
Fulham waa xaafad ka mida xaafadaha London, waxay ku taallaa qaybta galbeedka, 2007 ayaa lagu daray dhulka ay gaartay magaalada london ee dalka Ingiriiska. Fulham waxay taariikh u leedahay warshadaha iyo ganacsiyada dib udhiska illaa qarnigii 15aad, oo leh dhejiyo, dhar wasakhaysan, waraaqo iyo diyaargarow qarniyadii 17-aad iyo 18aad ee haatan Fulham High Street, iyo ka-qaybqaadashada warshadaha baabuurta, hore duulimaadka, waxsoosaarka cuntada, iyo isboortiga. 
Lillie Bridge Depot, oo ah dekedda tareenada ee la furay 1872, ayaa la xidhiidhay dhismaha iyo kordhinta dhismaha London Underground, farsamaynta khadadka Tube ee laga soo galo Saldhig Waddooyinka Lots Lots, iyo in ka badan qarni qaran ayaa ahaa xarun dayactir ah stock and track.  
Fulham waxaa loo tixgeliyaa inay tahay aag London ah oo ay leedahay wakiilada guryaha.  Laba kooxood oo kubadda cagta ah, Fulham iyo Chelsea, waxay ka ciyaaraan Fulham.  Waxaa jira laba naadi oo isboorti oo gaar ah, kooxda Hurlingham, oo loo yaqaan 'polo', iyo naadiga 'tennis-ka', oo loo yaqaano tartanka tennis-ka ee pre-Wimbledon sannadkiiba 
1800naadkii, Lillie Bridge Grounds waxay martigelisay shirarkii ugu horreeyay ee Isboortiga Amateur Athletic ee England, finalka FA Cup ee labaad, iyo kulamada ugu horeeya ee kubada cagta.
Goobta Lillie Bridge waxay ahayd aagga guriga ee ka tirsan Club of Middlesex County Cricket Club, ka hor inta aysan u guurin Marylebone. 
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Fulham&oldid=179231"
Last edited on 31 Agoosto 2018, at 10:41